Wafti Iskudhaf ah Oo Booqday Degmada Awbare. - Cakaara News
Wafti Iskudhaf ah Oo Booqday Degmada Awbare.
Lafa-ciise (cakaaranews) sabti, 16ka July, 2016 Wafti iskugu jira masuuliyiin heer deegaan ah iyo qurba joogta ka soo jeeda DDSI ayaa booqqay mashaariico horumarineed oo ah dhinaca wax soo saarka beeraha oo laga hirgaliyay degmada awbare gaar ahaan qabalaha lafa-ciise.
Haddaba waftigan oo ay Hogaaminayaan wasiirka Maalgalinta DDSI Mudane Cabdinaasir Maxamed iyo wasiir kuxigeenka Qurbajoogta DDSI Mudane Bashiir maxamed ayna ku wehelinayaan Masuuliyiinta Jaaliyadda DDSI Ee UK iyo masuuliyiinta degmada awbare ayaa soo kormeeray mashaariicahan horumarineed oo uu hirgaliyay muwaadin qurba joog ah.
Qurbajoogta DDSI ayaa waxay Qayb-weyn ka Qaataan Dhanka Maalgalinta deegaanka waxaana mashruucan dhinaca wax soo saarka beeraha maalgaliyay mudane Ismaaciil Cismaan oo ah Gudoomiye Kuxigeenka Jaaliyadda DDSI ee UK.
Waxaa halkaasi Warbaahinta kula hadlay Wasiirka Maalgalinta DDSI Mudane Cabdinaasir Maxamed oo Sheegay in uu aad ugu farxsan yahay in jaaliyadda DDSI Ee UK ay dadaal balaadhan ay sameeyeen dhanka maalgalinta iyo wacyogalinta Nabadgalyada iyo maamulka Suuban mashruucana uu yahay mid ku dayasho mudan oo kaalin wayn ka qaadanaya tir tirid saboolnimada.
Waxaa kale oo ka hadlay Wasiir Kuxigeenka Qurbajoogta DDSI Mudane Bashiir maxamed oo ka warbixiyay Qurbajoogta u dhalatay Dawlad Deegaanka Somalida Itoobiya kaalinta miisaanka culus leh ee ay ka qaateen dhinacyada horumarka iyo xasiloonida DDSI.
Ugu Dambeyntii Gudoomiyha Jaaliyadda DDSI Ee UK Mudane Cali takhqal ayaa sheegay in uu aad ugu Farax san Sida jaaliyadda DDSI ee UK sida ay Markasta uga qayb-qaadato hawlaha Hormuudka dawlad deegaanka Somalida Itoobiya una mahad celiyay guud ahaanba xukuumada DDSI sida ay markasta u xoojiso xidhiidhka qurba joogta DDSI